ကလိုစေးထူး: မေတ္တာ အာဇာနည်…
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:40 PM
ကိုကို..အရမ်းကောင်းတယ် ပြန်ပြောင်းသတိရသလို အဲဒီအန်တီကြီး မျက်ရည်ကျရင်း ငိုနေတဲ့ပုံက
အရမ်းကို ဆို့နစ်ကြေကွဲစွာ ခံစားရပါတယ်။
Mar 20, 2008, 11:10:00 PM
၆ လပြည့်ကို ပြန်ပြီးခံစားသွားတယ် အစ်ကိုရေ့ ။ ရွှေဝါရောင်ကတော့ တစ်သက်လုံးစိတ်ထဲမှာစွဲနေမှာပါပဲ။.
Mar 21, 2008, 2:54:00 AM
Mar 21, 2008, 3:18:00 AM
ခြောက်လကြာခဲ့ပေမယ့် ဒီပုံရိပ်တွေ၊ ဒီသီချင်းတွေက ပြန်ကြည့်တိုင်း ရင်ထဲမကောင်းဘူးဗျာ။ မလုပ်သင့်တာတွေကို တကယ်ပဲ လုပ်ခဲ့ကြပြီပဲ။
ကိုစေးထူးရဲ့ ရေးဖွဲ့မှုကြောင့် မျက်စိထဲမြင်ယောင်ပြီး မနေ့တနေ့ကလို ပြန်ခံစားရပါတယ်။
Mar 22, 2008, 8:43:00 AM
အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့..အရမ်းဝမ်းနည်းခဲ့ရတဲ့ နေ့ ကို ပြန်ရောက်သွားတယ်အကိုရေ...
သူငယ်ချင်းက Gtalk ကနေပြောတယ်..ပစ်ကုန်ပြီတဲ့လေ..ကြေကွဲစွာနဲ့ဖုန်းတွေခေါ်ရတဲ့နေ့ပေါ့....
Mar 22, 2008, 9:10:00 AM
Your article is very good. I also read it in Mizzima news and madeacomment. Here also I madeacomment yesterday but I don't know why it didn't get in.Thank you very much for your creative literature from fact.
Mar 24, 2008, 7:28:00 PM
Apr 2, 2008, 12:14:00 PM